Uhlalutyo lwee-headset ze-Origem HS-3, ii-headphone zakho ukuze ungayeki | Iindaba zeGajethi
Uhlalutyo lwe-Headset HS-3 yoLungiso
URafa Rodríguez Ballesteros | | Reviews
Siyaqhubeka nokuvavanya izixhobo ezinxulumene nomculo. Izixhobo ezisinceda ukuba sizuze kakhulu kwii-smartphones zethu. Namhlanje siyakubonisa ii-headphone zethu kuthi ezithanda ukonwabela umculo xa sisenza imidlalo, i Ukuziqhelanisa HS-3.
Njengoko sibona kwimarike, Okwangoku kukho amakhulu ezimodeli yoLungiso. Ezo zibonelela ngetekhnoloji yeWiereles eyiNgcali yetekhnoloji engenazingcingo ime ngaphandle ukuba yeyona intsha. Kodwa ngokweemfuno zomsebenzisi ngamnye, ezi ntloko zinokungafaneleki.
1 I-Origem HS-3, umculo wakho ulandela isingqisho
2 Yenzelwe ukuxhasa umsebenzi wethu
3 Isandi somgangatho omangalisayo
4 Itheyibhile yokucacisa i-HS-3 ye-Origem
5 Iinkonzo kunye neengozi ze-Origem HS-3
I-Origem HS-3, umculo wakho ulandela isingqisho
Njengoko sisitsho, ngohlobo lomdlalo oziqheliselayo. Kwaye kwakhona ngokobunzulu ngayo siziqhelanisa nayo, zincinci Iifowuni ze-TWS inokuvela ukungakhululeki. Hayi ngenxa yesisindo okanye ukusebenza. Kodwa ewe inokukhupha indlebe kwaye iwe phantsi. Ukuqhekeka, ukulahleka, kwaye ekugqibeleni kumise isingqisho.
Nge Ukuziqhelanisa HS-3 Kuya kufuneka ukhathazeke ngokubetha olona phawu lwakho lubalaseleyo. Ngaba kunjalo Uyilo olucingisisiweyo ukwenzela ukuba bangawi okanye baphume. Ukongeza kwimilo yeatomical yentloko yakho, in ifomathi yangaphakathi ingena ngokugqibeleleyo. HS-3 Banenye into yokubopha ukuze bangawi kwaye sinokuphulukana nabor.
La Utyikityo lwe-Origem wazalwa kungekudala, ngo-2.014. Yenziwe ngu iinjineli ezinamava zesandi kunye netekhnoloji. Kwaye neqela loyilo elinomdla ngomculo. Eyona njongo iphambili kukubonelela elona xesha lilungileyo lokumamela ngamaxabiso afikelelekayo. Kodwa ngaphandle kokutyeshela uyilo olunomtsalane nolutsha.
Kucacile ukuba i-Origem HS-3 ayizukubonwa. Bano uyilo olubambisa amehlo ngelixa lihle. Ukukhethwa kwemibala emnyama nebomvu kuyaphumelela njengoko zibenza bagqame. Uluvo lokuba basenekhebula lunokubenza babonakale ngathi abazukugqibela. Kodwa kuyacaca ukuba kukho abo bakhetha amaqhosha angaphandle kwentloko ukuzisebenzisa ngokulula.
Thenga i-Origem HS-3 apha kwiAmazon
Yenzelwe ukuxhasa umsebenzi wethu
Ekuboneni kokuqala unokubona ukuba abayili be-Origem bafuna HS-3 sean ukhetho kubathandi bemidlalo yangaphandle. Sibona indlela iseti yentloko eye Uyilo lwe-ergonomic oluhambelana ngokugqibeleleyo nendlebe. Kwaye a ubunzima obutofotofo ngenxa yokuba kukhanya kangakanani.
Isiphatho sesandla sinayo Ubungakanani beephedi ezahlukeneyo ukuqinisekisa ulingano olufanelekileyo. Ngaphezu kwayo yonke loo nto ukusebenza kwesandi ukuba ezi ntloko zinokubonelela ngokonwaba ngokupheleleyo. Intuthuzelo ibalulekile xa siza kuyisebenzisa kwezemidlalo, kodwa yazi ukuba asizukuphulukana nabo.
Kulo Inxalenye engaphandle yentloko esentloko sibona ujikelezo lwentsimbi embindini wayo ilogo yomqondiso. Ngasentla nje sibona iifayile ze- Inkxaso engaphezulu kwendlebe. Omnye Isiqwenga esiqinileyo sentsimbi yeplastikhi enephedi ethambileyo kwindawo ephumla ngasemva kwendlebe. Ikwayi-rUkulungelelaniswa nokulungiswa okupheleleyo kwaye ukhululekile ngokwenene.
Kwii-headphone asizukufumana akukho lawulo lokuchukumisa okanye amaqhosha. Ngale nto, i-Origem HS-3 inayo iphedi yamaqhosha ezimeleyo ilula njengoko iluncedo. Nje amaqhosha amathathu, vuliwe kwaye ucime, eya kuthi isebenze ukuphendula okanye ukuxhoma iifowuni. Kwaye amanye amaqhosha amabini olawulo lwevolumu athi ngokucofa kabini ahambise umkhondo phambili okanye ngasemva.
Ikwakhona kwindawo yeqhosha umboko ukuthetha efowunini. Kwelinye icala lalo, izibuko lonxibelelwano "lokutshaja ngokukhawuleza". Sisinxibelelanisi Micro USB ekuya kufuneka sikwenze oko qhagamshela intambo imizuzu engama-30 kuphela Ukonwabela ukuya kwiiyure eziyi-6 zomculo ingayeki.
El intambo ngombala obomvu Kubonakala kutyebile kancinci kunezo ziintloko zentloko. Isiqinisekisa a ungqamaniso olufanelekileyo lwesandi sawo omabini amajelo Akukho lahleko yesandi okanye uqhagamshelo kuyo nayiphi na i-headphone. Kwaye ingemva kwentamo ayizukubeka ngxaki nokuba usebenza okanye udlala imidlalo. Ngaba zii-headphone ozijongileyo? Ungathenga ngoku ukucofa kule khonkco i-Origem HS-3 kwiAmazon.
Isandi somgangatho omangalisayo
Nangona kunjalo imbonakalo yomzimba ibalulekile kakhulu nakwesiphi na isixhobo, Isandi siyimfuneko kwii-headphone. Kwaye ekubeni iyintloko kunye nokuqhelaniswa okucacileyo ngokubhekisele kwiimbaleki, kukho izinto ezithile ezibalulekileyo ekufuneka zithathelwe ingqalelo. Ukuthatha ingqalelo kwangaphambili ukuba Ukuthintela kunye nokukhuseleka akuyi kuba yingxaki.
Siyithandile eyakho inqanaba levolumu enamandla. Ngamaxesha athile siye savavanya ii-headphone ezinamanqanaba aphezulu evolumu asilela. Oku kubaluleke ngakumbi xa zizii-headphone zokusetyenziswa ngaphandle. Ke ngoko, ukongeza ekubeni une ukuqina okuhle inikwe inkqubo yayo yangaphakathi, zivakala kakhulu ngokwaneleyo ukuba sinokuva umculo wethu kuphela.
Kodwa umculo awuvakali nje phezulu. Simangalisiwe yi umgangatho ozwakalayo sinokuxhomekeka kwi-Origem HS-3. I-Bass ivakale ngokucacileyo. Kwaye izandi ezihambayo kunye Ukucaca kunye nomgangatho sinokulindela kwizixhobo ezibiza kakhulu. Sithanda ukuzibeka ukuya kwelona liphezulu ngaphandle kokugqwetha okuviwa. Ngamafutshane, umba wesandi apho i-HS-3 ifumana inqaku elilunge kakhulu, kwaye ke ungazithenga sele zikhona kwiAmazon
Ifemi ye-Origem ibonisa isifuba sayo nge-HS-3 yokuba lIifowuni zokuqala zokufaka itekhnoloji entsha ye-HDR (Uluhlu oluPhezulu lweDynamic). A Ialgorithm ekwaziyo ukutshintsha ngokunamandla isandi samaza ahlukeneyo ngokuzenzekelayo. Ngale ndlela ibonelela nge ngamava nje alungileyo e stereo.
Itheyibhile yokucacisa i-HS-3 ye-Origem
Inkqubo yoLungiso Ngaphakathi
Conectividad i-Bluetooth 5.0
Umgama oxhasiweyo ukuya kuthi ga kwi-10 yeemitha
ICarga Intlawulo encinci ye-USB port
Ixesha lokutshaja Imizuzu ye30
Ukuzimela Iiyure ze6
Ulawulo Amaqhosha omzimba ama-3
Ubukhulu X x 18 10 5 cm
Ubude bekhebula 70 cm
U bunzima 20 g
Ixabiso 94.99 €
Ikhonkco lokuthenga Ukuziqhelanisa HS-3
Iinkonzo kunye neengozi ze-Origem HS-3
Ukufezekisa ukubaleka okanye badlale imidlalo yangaphandle ngaphandle kokukhathazeka ukuba baya kuwa, baphule okanye baphulukane.
Umgangatho onikezelwa yi-algorithm yenoveli Isandi se-HDR.
Ukuhlawulisa ngokukhawuleza Kwimizuzu nje engama-30 siyakuba neeyure ezi-6 zomculo ongapheliyo.
Splash kunye nokumelana namanzi enkosi Isiqinisekiso se-IPX5.
Yenzelwe imidlalo yangaphandle
Yiba ikheyibhileNangona isemva kwentamo ibonakala indala.
Ayinalo ulawulo lokuchukumisa kwi-headset uqobo.
El xabiso idlula kulindelo kwaye ayikhuphisani kakhulu.
Intambo yaphuma kwisitayile
Akukho lawulo lokuchukumisa
Phezulu kunexabiso elilindelweyo
Inqanaba leenkwenkwezi ezi-3
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Reviews » Uhlalutyo lwe-Headset HS-3 yoLungiso
I-Fossil iveza isizukulwana sayo esitsha seewotshi nge-Wear OS